Wind Turbine Blade Polyurethane ukumnika Resin WD8085A / WD8085B / Wind Power Blade Epoxy Matrix Resin WD0135 / WD0137
I-WD8085A / B yenzelwe ngokukhethekile inqubo yokumnika okumuncu kwezinhlamvu zomoya ophephela. Ine-viscosity ephansi ekamelweni lokushisa, isikhathi eside sokusebenza, ukuphulukiswa okusheshayo ngemuva kokushisa, nokusebenza kahle kokukhiqiza. Inezakhiwo ezinhle kakhulu zomshini, ukumelana nomthelela omuhle, ukumelana nokukhathala nokumelana nokugqwala kwamakhemikhali.
PU Sealant WD8510 / Kushintshwe Silane Sealant WD6637 / Futha Yesigcilikisha WD2078
I-WD8510 iyinhlanganisela eyodwa epholisa umswakama ophulukisa i-adhesive sealant ene-polyurethane njengengxenye eyinhloko, ephendula futhi inamathisele ngomswakama emoyeni ukwakha ukuhlangana okuguqukayo. Lo mkhiqizo awudingi i-primer, futhi unamathela kakhulu futhi uvalwe ngezinto ezifana nensimbi, i-aluminium ene-anodized, insimbi edwetshiwe, ukhuni, i-polyester, ukhonkolo, ingilazi, injoloba kanye nepulasitiki, kanye nepulasitiki eqinise ingilazi.
Igama lomkhiqizo: Casein Adhesive
Uhlobo lomkhiqizo: TY-1300A
Isicelo: Ukulebula ngamabhodlela kabhiya
Izithako zamakhemikhali: I-Casein, iStarch, i-Additive, njll.
Izithako ezinobungozi: Azikho
Uhlobo lomkhiqizo: TY-1300B
Uhlobo lomkhiqizo: TY-1300BR
I-WD8118A / B Izinto Ezimbili Ezinamathelisi Zokunamathisela Ezihlanganisiwe Zokupakisha Okuguqukayo
Lo mkhiqizo uthandwa kakhulu phakathi kwamakhasimende ethu. Ifanele imikhiqizo ejwayelekile, njengePET / PE, PET / CPP, OPP / CPP, PA / PE, OPP / PET / PE, njll. Isici sayo sokuhlanza okulula ngaso sonke isikhathi sidunyiswa ngabasebenza nge-laminator. Nge-viscosity yayo ephansi, isivinini se-laminating singafika ku-600m / min (sincike ezintweni ezisetshenziswayo nasemshinini), esebenza kahle kakhulu.
I-WD8262A / B Izingxenye Ezimbili Ezinamathela Zokunamathela Zokunamathela Zokupakisha Okuguqukayo
Uma unemikhiqizo ye-Alu foil, le modeli izoba ukukhetha okuhle kuwe. Uhlelo lokusebenza lubanzi ububanzi kufaka phakathi ipulasitiki / ipulasitiki, i-Alu / ipulasitiki. Ukupakisha kwezimboni nokuphekiwe kusebenza kakhulu. Inamandla amakhulu okuhlanganisa futhi ingamelana no-121 ℃ imizuzu engama-40.
I-WD8212A / B Izinto Ezimbili Ezinamathela Ezinganamatheli Zokunamathela Kokufaka Okuguqukayo
Umkhiqizo ophulukisa ngokushesha cishe isikhathi esingu-24 h sokuphulukisa. Kungumkhiqizo wokusetshenziswa okujwayelekile wokupakisha okuvame kakhulu, njengokudla okulula, unamathisele, amabhisikidi, u-ayisikhilimu, njll.
I-Wind Turbine Blade Epoxy Structural Adhesive WD3135D / WD3137D / Wind Turbine Blade Vacuum Sealant Tape WD209
I-WD3135D wind turbine blades special glue (main agent), WD3137D wind turbine blades special glue (curing agent) iyinhlanganisela enezinto ezimbili, i-solvent-free epoxy adhesive, ngemuva kokuphulukisa ngamandla amakhulu, ukuqina okuphezulu, ukuminyana okuphansi nokunye ukusebenza okuphezulu.